Ipa kwakasiyana kubata kune yako Apple Watch neiyi tambo | Ndinobva mac
Kana iwe uchida tambo yakasarudzika uye yemazuva ano ine chaiyo cutout uye iine zero kupindirana nemabasa eApple Tarisa iyi ndiyo sarudzo yako uye kunyangwe ichiti yakati kurei, vazhinji ndivo vashandisi vanogona kufara netambo yerudzi urwu.
Zviripachena kuti Apple haina kugadzira iyo Apple Watch zverudzi urwu rwema tambo mune izvo zvakagadzirirwa mutumbi weApple Watch pane tambo uye kwete tambo paApple Watch. Mune ino kesi, tambo tambo akasungirirwa zvakasimba kune imwe mhando yebhamba rinodzivirira muviri wese weApple Watch.
Netambo iyi unodzivirira muviri wese weApple Watch uye, sezvauri kuona, yakagadzirwa nerabha uye zvakare ine bhamba Yakagadzirwa ne polycarbonate inodzivirira kesi yesimbi yeApple Watch kubva mukukwaya.
Izvo zvinhu zvisina kureruka zvakagadzirwa netambo hazvingawedzere huremu kana huremu pachiuno panguva yekushandisa, zvichiita kuti ive sarudzo inogamuchirwa. Panyaya yekuenderana, inoshanda kune iyo Apple Watch Series 1,2 uye 3 asi chete yeiyo 42mm kesi.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve tambo iyi unogona kushanyira Iyi link mauchazokwanisa kuzvitenga nemutengo we 21,99 euros. Iyo inongowanikwa chete mutema uye sezvinoonekwa mumifananidzo, nzira iyo inovhara paruoko Izvo zvakafanana neApple's fluoroelastomer mabhandi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ipa yako Apple Tarisa kubata kwakasiyana neiyi tambo
Apple yaigona kuvhura yayo yekutanga Apple Chitoro muIsrael
Forecast Bar - Mamiriro ekunze + Radar, iro rakazara kwazvo app kutarisa mamiriro ekunze